सेवा गर्न पाउँदा आनन्द - Pradesh Today सेवा गर्न पाउँदा आनन्द - Pradesh Today
सेवा गर्न पाउँदा आनन्द
एड्मिनः फेमिना ग्रुप
नेपालमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोगले समाजमा विकृति ल्याउने काम ग¥यो भन्ने एक किसिमले आलोचना भइरहेको छ । समाजमा सञ्जालकै कारण विभिन्न किसिमका घटनाहरू पनि हुने गरेका छन् । तर सामाजिक सञ्जाल विकृति होइन्, यसले विभिन्न किसिमका फाइदाहरू पनि पु¥याएको छ । यसैको एउटा उदाहरण हो, फेमिना गु्रप । आज हामीले यसै ग्रुपका एड्मिन संगीता ढकालसँग कुराकानी गरेका छौँ । –जीतसागर जी.एम.
फेमिना ग्रुप के हो ?
फेमिना ग्रुप भनेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ग्रुप हो । यसमा अहिले हामी करिब ४४ हजारजना जोडिएका छौँ । गु्रपमा सम्पूर्ण महिला छौँ, त्यसकारण पनि गु्रपको नाम फेमिना राखेका हौँ । यसमा पुरूषहरू जोडिन मिल्दैन् तर हामीले एउटा पेज पनि बनाएका छौँ ।
पेजमा चाहिँ महिला पुरूष दुबैजना जोडिन मिल्छ । यो ग्रुप एड्मिन र मोडिरेटर १३ जना छौँ । अनि रिप्रेसेन्टेटिभ चाहिँ १७ जना छौँ, सबैले आ–आफ्नो काम बाँडेर गछौँ ।
ग्रुप निर्माण गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो ?
हाम्रो यो गु्रप निर्माण गर्नुको मूख्य उद्देश्य नै सामाजिक काम गर्न हो । समाजमा अहिले पनि कतिपय नागरिक खान नपाएर, भोकभोकै बस्न बाध्य छन् । कतिपय नागरिक विपन्नताका कारण औषधि उपचार गर्न नपाएर थलिएर बसेका छन् ।
हामीले विषेशगरी त्यस्ता नागरिकलाई मानवीय सेवाभावले सहयोग गर्ने गरेका छौँ । कोही पनि भोकै बस्नु नपरोस, कोहि पैसाकै कारण अभावमा छट्पटाउनु नपरोस् भनेर नै हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा फेमिना गु्रप निर्माण गरेर एउटा अभियानको शुरूवात गरेका छौँ ।
यस्तो अभियान कहाँ– कहाँ हुन्छ ?
हामीले अहिले ठ्याक्कै यहाँ भन्ने भन्दा पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सबै नागरिकलाई कुनै पनि सहयोग गर्न तयार छौँ । केही दिन अघिमात्रै झापा र विराटनगरमा राहत वितरण गरेका थियौँ, दाङमा पनि हामीले थुप्रै सहयोग गरेका छौँ ।
अहिले पनि तुलसीपुर–६ गोलौराका मानबहादुर विकको उपचारका लागि आवश्यक सहयोगार्थ रकम संकलन गरिरहेका छौँ । उहाँहरूको परिवारिक अवस्था निकै नाजुक रहेछ, मानबहादुर बिरामीले थला पर्नुभएको छ,
श्रीमतीले श्रीमानको सहयोग गर्नका लागि काम गर्न छोड्नुभयो । जसका कारण उहाँहरूलाई औषधि उपचारको समस्या भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले देश तथा विदेशमा रहनु हुने नेपालीबाट सहयोग संकलन गरी उहाँको परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएका छौँ ।
तपाईहरूले सहयोग गर्ने रकम आउने श्रोत कुन हो ?
मैले तपाईलाई भनेनी, हामीले सहयोग गर्ने भनेको रकम देश तथा विदेशमा रहनुभएको नेपालीले हो । त्यसबाहेक हामी आफैले पनि रकम उठाउने गरेका छौँ । अहिले तुलसीपुरमा चटपटदेखि चुराको व्यवसाय गरेर भएपनि रकम संकलन गरेका छौँ ।
मानबहादुर विकको सहयोगका लागि हामीले केही दिन अघि चुरा तथा चटपटको व्यवसाय सञ्चालन गरेका छौँ । त्यसबाट संकलन भएको रकम नै उहाँको परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।
घर परिवारदेखि समाजको साथ कस्तो छ ?
घर परिवारको सहयोग नभए त म यस्तो काम नै गर्न सक्ने थिएन्, घरपरिवारको सहयोगले नैै म यहाँसम्म आइपुगेको छु । समाजले पनि उतिकै साथ र हौसला दिने गरेको छ । जसका कारण यो सामाजिक काममा सफलता मिलेको छ ।
अहिले पनि देश तथा विदेशबाट फोन तथा मेसेज आउँछ, खुशी लाग्छ, तपाईहरूले गरेको काम निकै राम्रो छ, म पनि सहयोग गर्न चाहन्छु भनेर भन्ने गरेको पाइन्छ ।
गु्रपमा धेरै जना हुनुहुन्छ, विचार फरक–फरक होला, कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
हो, हामी धेरैजना छौँ, हाम्रा विचार फरक–फरक होलान् तर हामीले छलफलका माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्ने गरेका छौँ । कुनै पनि निर्णय गर्दा सबैजनाले विभिन्न किसिमका विचार दिने गर्नुहुन्छ । तर हामीहरू निचोडमा पुग्न सफल हुन्छौँ ।
पहिले दाङ फेमिना ग्रुप थियो, अहिले फेमिना ग्रुपमात्र कसरी रह्यो ?
पहिले पहिले दाङ फेमिना ग्रुपबाट हामीले विभिन्न किसिमका सामाजिक कामहरू गरेका थियौँ, पछि काम गर्दै जाँदा यसको कार्यक्षेत्र जिल्लातहमा सिमिति रहेन त्यसपछि हामीले फेमिना गु्रप राखेका हौँ । शुरूमा त स्मिृति केसी र म मिलेर खोलेका थियौँ, यो गु्रपपछि विस्तारै कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै लगेका हौँ । दुई महिना अघिमात्रै नाम परिवर्तन गरेका हौँ ।
हामीले सहयोग गर्ने भनेको रकम देश तथा विदेशमा रहनुभएको नेपालीले हो । त्यसबाहेक हामी आफैले पनि रकम उठाउने गरेका छौँ । अहिले तुलसीपुरमा चटपटदेखि चुराको व्यवसाय गरेर भएपनि रकम संकलन गरेका छौँ ।
सामाजिक काम मात्रै हो कि अरू काम पनि हुन्छ ?
अहिले स्पेशल सामाजिक काममात्रै नै हो, तत्कालको अवस्थामा अरू काम गरेका छैनौँ ।
चुनौती कत्तिको छ ?
अहिले फिल्डमा काम गर्दा चुनौती त छ तर सबैको साथ र सहयोग राम्रो हिसावले पाइरहेका छौँ । त्यसकारण पनि त्यति धेरै चुनौती खेप्नुपरेको छैन् । ग्रुपमा कहिलेकाहिँ हेल्प पोष्टमात्र हुँदैन्, कहिलेकाहिँ रमाईला पोष्ट पनि हुन्छन् । गु्रपमा सुरक्षाको चुनौती त छ तर अरू समस्याहरू कम छन् । यसलाई हामीले सकेसम्म त्यस्तो नहोस् भनेर प्रयास गरिरहेका छौँ ।
कस्तो किसिमको सहयोग गर्नुहुन्छ, नगद वा भौतिक सामग्रीको ?
यस्तो छ, अव अवस्था हेरेर हुन्छ । कतिपय ठाउँमा नगद सहयोग हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा भौतिक पनि सहयोग हुने गर्छ । मुख्यगरीगाँस, बाँस र कपासका लागि आवश्यक कुरा नै सहयोग गर्ने गरेका छौं ।
पारदर्शिताको विश्वसनीय आधार के हो ?
एउटा कुरा के भने कुनै पनि व्यक्तिलाई हामी आफै नै पुगेर सहयोग गर्ने गर्दछौँ । त्यसकारण पनि झुठो भन्ने हुँदैन् । वास्तविक पीडितलाई मात्रै सहयोग गर्ने गरेका छौँ । अहिले हामीलाई दाताहरूले दिएको सबै विवरण हामीले पोष्टमा राखिदिने गरेका छौँ । त्यसकारण पनि दाताहरूले हामीलाई अविश्वास गर्ने ठाउँ छैन् ।
अहिले बन्दाबन्दीका कारणले गर्दा कसलाई के आवश्यकता छ, त्यसमा बढी केन्द्रित भएका छौँ । त्यस्ता ठूला कार्यक्रमहरू केही त छैन् । अहिले चाहिँ जति पनि सहयोगका लागि आउनुहुन्छ, त्यस्तोलाई सहयोग गरौँ भन्ने छ । समाजमा केही त्यस्ता उदाहरण्ीाय काम गरौँ भन्ने सोंच चाहिँ छ ।
अन्त्यमा, मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलगायत यहाँको मिडियालाई धेरै–धेरै धन्यवाद दिन्छु । हाम्रो केही कुरा भएपनि मिडियामा ल्याउने अवसर दिनुभयो । सधै, साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।